कार चढ्न नसक्नेका लागि हुन्डाईको सबैभन्दा सस्तो एसयूभी कार बजारमा आउंदै – Etajakhabar
मेरो अटो – हुन्डाईले माइक्रो एसयूभी ‘एएक्स’ निर्माण गर्न सुरु गरेको विषयलाई गतवर्ष हुन्डाई इन्डियाका एमडी तथा सीइओ वाई के कुले जानकारी दिएका थिए । तर, त्यसपछि उक्त माइक्रो एसयूभी कस्तो हुने तथा कहिलेबाट बजारमा आउने भन्ने विषयमा केही जानकारी बाहिर आएको थिएन । अब भने दक्षिण कोरियाली पत्रिका ‘डिजिटल टाइम्स’ले हुन्डाईको माइक्रो एसयूभी प्रोजेक्ट अगाडि बढेको उल्लेख गरेको छ । बजारमा आएसँगै हुन्डाईकाे याे सबैभन्दा सस्ताे माइक्राे एसयूभी हुनेछ ।
कम्पनीले बनाउन लागेको उक्त माइक्रो एसयूभी भारतीय बजारलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण सुरु गरिएको छ भने भारतपछि कोरिया, ब्राजिल, नेपाल जस्ता देशमा बिक्री वितरण गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसलाई कम्पनीले ग्वान्झु सहरमा रहेको आफ्नो नयाँ प्लान्टमा उत्पादन गरिरहेको डिजिटल टाइम्सले दाबी गरेको छ । यसलाई कम्पनीले नयाँ जेनेरेशन सेन्ट्रोको के१ प्ल्याटफर्ममा निर्माण गर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त ग्वान्झु प्लान्टबाट वार्षिक ७० हजार यूनिट माइक्रो एसयूभी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
कम्पनीले एएक्स कोड नेममा उत्पादन गरिरहेको उक्त माइक्रो एसयूभीमा १.० लिटर टर्बो इन्जिनमा ल्याउने छ । यसलाई पहिलो पटक भने भारतीय बजारमा नै सार्वजनिक गर्ने कम्पनीको तयारी रहेको जनाइएको छ । कम्पनीले कन्सेप्ट मोडललाई आगामी अटो एक्स्पो २०२० मा सार्वजनिक गर्न सक्ने संभावना निकै धेरै रहेको जनाइएको छ ।
नयाँ एएक्स माइक्रो एसयूभीले भारतीय बजारमा रेनो क्वीड, मारुती सुजुकी एस–प्रेसो, टाटा हर्नविलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीको यो मोडल सेन्ट्रो र ग्रान्ड आई १० को बीचको मोडल हुनेछ ।
Posted on: Monday, September 23, 2019 Time: 11:26:23
आज देखि नेपाल टेलिकमले सिमकार्डमा पैसा नभए पनि आफन्तलाइ फोन गर्न सकिने !
आज राति १२ बजे देखि नेपाल टेलिकमले सिमकार्डमा पैसा नभए पनि आफन्तलाइ फोन गर्न सकिने !
-20585 second ago
-19472 second ago
-18643 second ago